Ndepụta Ahịa Email maka ezumike
Ọ bụ Fall nke pụtara ịlaghachi ụlọ ahịa na-aga n'ihu na ụmụ akwụkwọ na-alaghachi na klaasị. Otú ọ dị,
Oge. Mara na n’agbanyeghi na o bu August, otutu ndi mmadu amalitela ileba anya n’ime onyinye. Ọ bụrụ na ha chọta ya maka ọnụahịa kwesịrị ekwesị, ha na-aga n'ihu ma zụta iji gafere egwuregwu ahụ. Ọnọdụ ozi ịntanetị gị maka ndị na-ege ntị na nka na ozi ịntanetị iji jide ndị na-azụ ahịa ahụ. N'ezie, ụfọdụ ụbọchị ndị kachasị mkpa ịchọrọ ịkwado bụ Black Friday na Cyber ​​Monday, mana ị kwesịrị ịnye ndị debanyere aha gị oge ezumike niile.
Ezumike ndebiri. Gburugburu ezumike bụ otu n'ime oge ndị ahụ ọtụtụ ndị na-ere ahịa email nwere ike ịpụ na igbe ma gbakwunye ntakịrị ezumike na ndebiri ha. Ihe okike okike nwere ike ime ka ndị debanyere aha pịa ma zụta.
Na-emekọ na Pụrụ Iche. Zipu ihe ncheta nye ndị debanyere aha gị ka ezumike ndị ahụ na-eru nso. Gụnye Kupọns ma ọ bụ ọpụrụiche maka onyinye ndị ezinaụlọ, ndị enyi, na ọbụnadị ndị nkuzi ụmụaka. Ndị debanyere aha ga-enwe ekele na ị rụọla ọrụ ahụ maka ha ma nye ha ụfọdụ echiche.
Mobile. Enwere nnukwu nsogbu na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-azụ site na ngwaọrụ mkpanaka ha n'oge ezumike n'afọ a. N'afọ a, ọ dị mkpa na saịtị gị kachasị maka mkpanaka. Wantchọrọ ijide n'aka na ọ dị mfe maka ndị debanyere aha ịnyagharịa na iji. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha ga-ahapụ ma chọta onye asọmpi ịzụta site n'aka.
Nweta Social. Olileanya na ị na-ama gụnyere mmadụ njikọ na gị ozi ịntanetị. Agbanyeghị, na ezumike, ọ dị mkpa ịtinye ha ma gosi ha! Pinterest ewepụla afọ a ma ọtụtụ ndị tụgharịrị uche na ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere ọnụnọ ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ iduzi ndị debanyere aha na profaịlụ gị iji hụ ngwaahịa na iji zụọ ihe.
Ndị a bụ nanị ndụmọdụ ole na ole iji bido mejuputa atụmatụ ezumike email gị. Kedu ndụmọdụ ndị ọzọ ị nụrụ banyere ma na-atụle ịgbakwunye mkpọsa email gị?
Tags: amụọezumikendepụta ezumikeMobile na Mbadamba ụrọSocial Media Marketingọpụrụichendebirioge
Izu oke zuru oke na Speed ​​Speed
Uh-oh… ugbua eruola ịmalite atụmatụ? 🙂